Vidio nkwado na-egosi mkpa ọkpụrụkpụ nke ụdị LG X | Gam akporosis
LG G Style gosipụtara ịdị mkpa ya na vidiyo nkwado a
Izu gara aga LG X Style mara ọkwa, otu n’ime smartphones ọhụrụ isii site na LG nke bụ akụkụ nke usoro X 2016. Ndị isi ise ndị ọzọ bụ LG X cam, LG X ihuenyo, LG X ike, LG X mach na LG X max. Dịka ị pụrụ ịhụ, onye nrụpụta Korea adịbeghị mkpụmkpụ maka mwepụta nke ọtụtụ ọdụdụ dị iche iche nke nke ọ bụla nwere ebumnuche ya, dị ka ezigbo igwe ma ọ bụ igwefoto ka mma.
Ọ bụ ezie na anyị amaghị mgbe LG X Stlye ga-adị maka ịzụta, nke nwere ike ịbụ n'oge na-adịghị anya, LG taa gosipụtara a vidiyo nkwado na-egosi na ngwaọrụ. Vidio ahụ egosighi nkọwa ya, mana ọ na-elekwasị anya na oke nkenke nke ụdị X na 6,9 millimeters buru ibu na njiri mara mma. Ihe vidiyo a na-ekpughe bụ na ụdị LG X ga-enwe ụdị agba atọ dị iche iche: ọcha, ojii na ọla edo.
The X usoro na-abịa na ihe mgbaru ọsọ nke ụdị ọrụ ndị chọọ smartphones na atụmatụ nke ahụ pụtara site na ndị ọzọ. Enwere ndị ọrụ na-ahọrọ igwefoto ka mma, ebe ndị ọzọ na-atụba onwe ha na ihuenyo ka mma iji nwee ike ịmalite ọdịnaya ọdịnaya niile. Usoro a achọghị ịhapụ onye ọ bụla na echiche ya bụ imeju ọtụtụ ndị ọrụ dị iche iche.
LGdị LG X bụ ekwentị na-elekwasị anya na ịke ka aha ya si kwuo. Na-arụ ọrụ na Android MarshmallowỌ nwere ihuenyo 5-anụ ọhịa nwere mkpebi 720 x 1280 na n'ime afọ ya anyị nwere ike ịchọta mgbape quad-core Qualcomm Snapdragon 410. A na-esonyere ya 1,5 GB nke Ram, 16 GB nke nchekwa sara mbara site na kaadị microSD na batrị 2.100 mAh .
Ekwentị na agaghi eburu ya n’ego nke ahụ na-echekwa nchịkọta niile nke ekwentị ndị China nke dị n'agbata ala na ọkara na-agba mgba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG G Style gosipụtara ịdị mkpa ya na vidiyo nkwado a
BitTorrent Ugbu a bụ ngwa ọhụụ ọhụụ nọọrọ abịarutela gam akporo